Jidgooyooyin horleh oo la soo dhigay Wadada u dhaxeysa Afgooye iyo Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
20th May 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Muqdisho (Mareeg)—Maleeshiyeed hubeysan oo ku labisan dharka Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in isbaarooyin horleh ay soo dhigteen qeybo ka mid ah Wadada dheer ee xiriirisa Magaalooyinka Afgooye iyo Baydhabo.
Jidgooyooyinkan xad-dhaafka ah ee la soo dhigay inta u dhaxeysa Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose iyo Degmada Baydhabo ee Gobolka Bay ayaa lacago badan oo sharci darro ah waxaa looga qaadaa Gaadiidka halkaasi isticmaala.
Jaamac Macalin Cabdi oo ka mid ah Waxgaradka Soomaaliyeed oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa ku eedeeyay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo badasha isbaarooyinkaasi.
“ Wey muuqataa in jidgooyooyinkaasi ay u yaalaan xubno k tirsan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya” sidaasi yiri Nabadoon Jaamac Macalin.
Nabadoon Jaamac Macalin Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa Madaxda Dowladda Soomaaliya waxuu ugu baaqay in ay wax badan ka qabtaan isbaarooyinkaaasi.
Inta badan Shacabka isaga kala guusha Wadada dheer ee xiriirisa Degmooyinka Afgooye iyo Baydhabo ayaa muddooyinkan dambe waxey ka cawanayeen Isbaarooyin ay soo dhigteen sida la sheegay rag ku labisan dareeska militariga Soomaaliya, kuwaasi oo Dadka ku dhabibaateeya halkaasi.